1, 2. Ɔkwan bɛn so na onii ko a na ɔyɛ atifi fam hene no sakrae wɔ wiase ko a ɛto so abien mu?
BERE a Franseni nyansapɛfo ne abakɔsɛm kyerɛwfo Alexis de Tocqueville reka United States ne Russia amammui ho asɛm no, ɔkyerɛwee wɔ 1835 mu sɛ: “Obiako wɔ ahofadi sɛ ɔkwan titiriw a ɔfa so yɛ ade; ɔfoforo no wɔ nkoasom. Ɛsono . . . akwan a wɔn mu biara [fa] so; nanso, ɛte sɛ nea Onyankopɔn ahyɛ asie sɛ da koro bi ɔbɛma wɔn mu biara anya nea ɛbɛkɔ so wɔ wiase no fã so tumi.” Ɔkwan bɛn so na nkɔmhyɛ yi nyaa mmamu wɔ Wiase Ko II akyi? Abakɔsɛm kyerɛwfo J. M. Roberts kyerɛw sɛ: “Nokwarem no, wɔ Wiase Ko a ɛto so abien awiei no, ɛte sɛ nea awiei koraa no tumi akɛse abien a ɛsono emu biara koraa a biako wɔ Russia na nea ɛka ho no wɔ United States, Amerika, no na na wɔwɔ nea ɛkɔ so wɔ wiase no mu so tumi ankasa.”
2 Wɔ wiase ko abien no mu no, na Germany ne anafo fam hene—Anglo-Amerika Wiase Tumi—no tamfo titiriw, na na adi tumi sɛ atifi fam hene. Nanso, wɔ Wiase Ko II akyi no, wɔkyɛɛ ɔman no mu. West Germany bɛyɛɛ anafo fam hene no adamfo, na East Germany de ne ho bɔɔ tumi kɛse foforo—Komunist aman a na Soviet Union tua wɔn ano no ho. Aman anaasɛ amammui ahyehyɛde yi sɔree sɛ atifi fam hene, na ɛsɔre tiaa Anglo-Amerika Nkabom no denneennen. Ahene baanu no ntam akansi no danee Apuei ne Atɔe fam ntam ntawntawdi fi 1948 besii 1989. Wɔ bere a atwam no mu no, na German hene a ɔwɔ atifi fam no asɔre ‘atia apam kronkron’ no. (Daniel 11:28, 30) Na dɛn na Komunist aman no bɛyɛ wɔ apam no ho?
NOKWARE KRISTOFO TOTƆ NANSO WODI NKONIM
3, 4. Henanom na “wɔsɔre tia apam no atirimɔden so” no, na abusuabɔ bɛn na na wɔne atifi fam hene no anya?
3 Onyankopɔn bɔfo no kae sɛ: “[Atifi fam hene no] de tɛkrɛmakyene bɛma wɔn a wɔsɔre tia apam no atirimɔden so no awae.” Ɔbɔfo no de kaa ho sɛ: “Nanso wɔn a wonim wɔn Nyankopɔn no bedi nkonim, na wɔayɛ ade wɔ ɔkwan a etu mpɔn so. Na ɔman no mufo a wɔwɔ nhumu no bɛma nnipa pii anya ntease. Akyinnye biara nni ho sɛ wɔnam nkrante ne ogyaframa, nnommumfa ne afowde so bɛma wɔatotɔ nna bi.”—Daniel 11:32, 33, NW.
4 Wɔn a “wɔsɔre tia apam no atirimɔden so” no betumi ayɛ Kristoman akannifo a wɔkyerɛ sɛ wɔyɛ Kristofo nanso wɔn nneyɛe gu Kristosom din ankasa ho fĩ no nkutoo. Walter Kolarz ka wɔ ne nhoma Religion in the Soviet Union no mu sɛ: “[Wɔ wiase ko a ɛto so abien mu no], Soviet Aban no bɔɔ mmɔden sɛ ɛbɛma Asɔre ahorow no de honam fam nneɛma ne wɔn nneyɛe aboa na wɔde abɔ ɔman no ho ban.” Wɔ ɔko no akyi no, asɔre akannifo bɔɔ mmɔden sɛ wɔremma saa adamfofa no mu ntetew, a tumi a saa bere no ɛne atifi fam hene no nhyehyɛe a ɛpo Onyankopɔn mu gyidi no mfa ho. Enti Kristoman bɛyɛɛ wiase yi fã kɛse sen bere biara—ɔwae a ɛyɛ abofono wɔ Yehowa ani so.—Yohane 17:16; Yakobo 4:4.
5, 6. Na henanom ne “wɔn a wonim wɔn Nyankopɔn” no, na dɛn na ɛtoo wɔn wɔ atifi fam hene no ase?
5 Na nokware Kristofo—“wɔn a wonim wɔn Nyankopɔn,” anaa “wɔn a wɔwɔ nhumu” no nso ɛ? Ɛwom sɛ na Kristofo ‘brɛ wɔn ho ase hyɛ tumi a ɛkorɔn’ no ase sɛnea ɛfata de, nanso na wɔn a wɔte atifi fam hene no nniso ase no nyɛ wiase yi fã. (Romafo 13:1; Yohane 18:36) Bere a wɔhwɛ yiye hu sɛ wɔde ‘Kaesare de bɛma Kaesare’ no, wɔde ‘Onyankopɔn de nso maa Onyankopɔn.’ (Mateo 22:21) Eyi nti, wɔsɔre tiaa wɔn mudi mu a wokurae no.—2 Timoteo 3:12.
6 Esiane eyi nti, nokware Kristofo ‘totɔe,’ nanso “wodii nkonim.” Wɔtotɔe efisɛ wɔtaa wɔn denneennen, na wokunkum ebinom mpo. Nanso wodii nkonim efisɛ wɔn mu dodow no ara kɔɔ so dii nokware. Wodii wiase no so nkonim sɛnea Yesu yɛe no. (Yohane 16:33) Afei nso, wɔannyae asɛm no ka da, bere a na wɔda afiase anaa nnadeban mu mpo no. Bere a wɔyɛɛ saa no, ‘wɔmaa nnipa pii nyaa ntease.’ Ɛmfa ho sɛ wɔtaa Yehowa Adansefo wɔ aman a na atifi fam hene no di so no dodow no ara mu no, wɔn dodow kɔɔ anim. Esiane ‘wɔn a na wɔwɔ nhumu’ no nokwaredi nti, “nnipakuw kɛse” a wɔredɔɔso bere nyinaa aba saa aman no mu.—Adiyisɛm 7:9-14.
WƆTEW YEHOWA NKURƆFO HO
7. “Mmoa ketewa bi” bɛn na Kristofo a wɔasra wɔn a wɔte atifi fam hene no asase so no nyae?
7 Ɔbɔfo no kae sɛ: “Sɛ wɔma wɔn [Onyankopɔn nkurɔfo] totɔ saa a, wɔde mmoa ketewa bi bɛboa wɔn.” (Daniel 11:34a, NW) Nkonim a anafo fam hene no dii wɔ wiase ko a ɛto so abien no mu no maa Kristofo a wɔte atifi fam hene asase so no nyaa ahotɔ bi. (Fa toto Adiyisɛm 12:15, 16 ho.) Saa ara nso na wɔn a ɔhene a obedii n’ade taa wɔn no nyaa ahotɔ wɔ bere ne bere mu. Bere a Apuei ne Atɔe famfo ntawntawdi no reba awiei no, atumfo pii behui sɛ nokware Kristofo ho nyɛ hu, ma enti wogyee wɔn toom wɔ mmara mu. Wonyaa mmoa nso fii nnipakuw kɛse a wɔredɔɔso a wotiee nkaefo no asɛnka na wɔboaa wɔn no nkyɛn.—Mateo 25:34-40.
8. Ɔkwan bɛn so na ebinom ‘nam adɔkɔdɔkɔsɛm so’ de wɔn ho kɔbataa Onyankopɔn nkurɔfo?
8 Ɛnyɛ wɔn a wɔkyerɛe sɛ wɔn ani gye ho sɛ wɔbɛsom Onyankopɔn wɔ Apuei ne Atɔe famfo ntawntawdi no mfe no mu nyinaa na na wokura adwempa. Na ɔbɔfo no de kɔkɔbɔ ama sɛ: “Na nnipa bebree de adɔkɔdɔkɔsɛm bɛbata wɔn ho.” (Daniel 11:34b) Nnipa pii kyerɛɛ nokware no ho anigye nanso na wɔmpɛ sɛ wohyira wɔn ho so ma Onyankopɔn. Afei nso, na afoforo nso a ɛte sɛ nea wɔagye asɛmpa no atom no yɛ akwansrafo ankasa ma atumfo no. Amanneɛbɔ bi a efi ɔman biako mu kenkan sɛ: “Na nnipa yi a wɔmfa nnyinasosɛm nyɛ hwee no mu binom yɛ wɔn a kommunisim adi wɔn ti a na wɔawiawia wɔn ho aba Awurade ahyehyɛde no mu, ada nsiyɛ kɛse adi, na wɔama wɔn ɔsom mu dibea a ɛkorɔn mpo.”
9. Dɛn nti na Yehowa maa kwan ma Kristofo anokwafo bi ‘fomee’ esiane sɛ ebinom wiawiaa wɔn ho baa mu nti?
9 Ɔbɔfo no toaa sɛ: “Na mmadwemma no binom bɛtotɔ na wɔde ayi wɔn mu fĩ de atew wɔn ho ahoa wɔn ho fitaa akosi awiei bere no, efisɛ ɛbere a wɔahyɛ no bɛba ara.” (Daniel 11:35) Wɔn a wowiawiaa wɔn ho baa mu no maa atumfoɔ no nsa kaa anokwafo no binom. Yehowa maa nsɛm a ɛtete saa no sisii na ama wɔatew ne nkurɔfo ho. Sɛnea Yesu ‘suaa amane a ohui no mu osetie’ no, saa ara nso na anokwafo yi suaa boasetɔ fii wɔn gyidi ho sɔhwɛ no mu. (Hebrifo 5:8; Yakobo 1:2, 3; fa toto Malaki 3:3 ho.) Enti ‘wɔayiyi wɔn mu, atew wɔn ho ma wɔahoa.’
10. Dɛn na asɛm “akosi awiei bere” no kyerɛ?
10 Na Yehowa nkurɔfo bɛtotɔ na wɔatew wɔn ho “akosi awiei bere.” Nokwarem no, wɔhwɛ kwan sɛ wɔbɛtaa wɔn akosi nneɛma nhyehyɛe bɔne yi awiei. Nanso, tew a atifi fam hene no ntua bɛma wɔatew Onyankopɔn nkurɔfo ho ma wɔahoa no besi wɔ “bere a wɔahyɛ no” mu. Enti, wɔ Daniel 11:35 no, ɛsɛ sɛ “awiei bere no” yɛ bere a ehia na wɔde atew Onyankopɔn nkurɔfo ho bere a wogyina atifi fam hene no ntua ano no awiei. Ɛda adi sɛ tɔ a wɔtotɔe no baa awiei wɔ bere a Yehowa ahyɛ mu.
ƆHENE NO MA NE HO SO
11. Dɛn na ɔbɔfo no ka faa su a atifi fam hene no da no adi wɔ Yehowa tumidi ho no ho?
11 Ɛdefa atifi fam hene no ho no, ɔbɔfo no ka kaa ho sɛ: “Na ɔhene no bɛyɛ nea ɔpɛ, na ɔbɛma ne ho so adi onyame biara so akokurokosɛm, [na ɔbɛpo sɛ obegye Yehowa tumidi atom] na ɔbɛka anwonwasɛm atia anyame mu Nyame no, na ebesi no yiye akosi sɛ wobeyi abufuw no adi awie; na nea wɔahyɛ no pintinn no, wɔbɛyɛ. Na ɔremmu n’agyanom anyame, na ɔremmu mmea anigyede ne onyame biara, na obedi ade nyinaa so akokurokosɛm.”—Daniel 11:36, 37.
12, 13. (a) Ɔkwan bɛn so na atifi fam hene no poo “n’agyanom anyame”? (b) Na henanom ne “mmea” a atifi fam hene no ansusuw wɔn “anigyede” ho no? (d) “Onyame” bɛn na atifi fam hene no hyɛɛ no anuonyam?
12 Bere a atifi fam hene no rema nkɔmhyɛ nsɛm yi anya mmamu no, ɔpoo “n’agyanom anyame” te sɛ Kristoman Baasakoro nyame no. Kommunist aman hyɛɛ gyidi a ɛne sɛ Onyankopɔn nni hɔ ho nkuran ankasa. Enti atifi fam hene no yɛɛ ne ho onyame, ‘na odi obiara so akokurokosɛm.’ Wammu “mmea anigyede”—aman a na edi wɔn so, te sɛ North Vietnam a wɔsomee sɛ ne nniso no aboafo no—na ɔhene no ‘yɛɛ nea ɔpɛ.’
13 Bere a ɔbɔfo no retoa nkɔmhyɛ no so no, ɔkae sɛ: “Na obedi abannennen nyame no nĩ asi wɔn ananmu, na onyame a n’agyanom nnim no no, ɔde sika ne dwetɛ ne abohene ne afɛfɛde bedi no nĩ.” (Daniel 11:38) Nokwarem no, atifi fam hene no de ne ho too nnɛyi sraadi, “abannennen nyame no” so. Ɔhwehwɛɛ nkwagye denam ‘onyame’ yi so, na ɔde ahode pii bɔɔ afɔre wɔ n’afɔremuka so.
14. Ɔkwan bɛn so na atifi fam hene no ‘yɛɛ ade wɔ ɔkwan a etu mpɔn’ so?
14 “Na ɔde onyame nanani bi na ɛne abannennen a ɛyɛ den koraa no bedi; nea obu no no, ɔbɛma n’anuonyam asõ na wama wadi nkurɔfo bebree so, na wakyɛ asase no de ayɛ akatua.” (Daniel 11:39) Esiane sɛ atifi fam hene no de ne ho too sraadi a ɛyɛ ‘onyame nanani’ so nti, ɔyɛɛ ade wɔ “ɔkwan a etu mpɔn” sen biara so, na ɔdaa no adi sɛ ɔyɛ sraadi tumi a ɛyɛ den wɔ “awiei nna no” mu. (2 Timoteo 3:1) Ɔde amammui, sika, ne ɛtɔ bere bi a asraafo mmoa maa wɔn a wogyinaa n’amammui adwene no akyi no.
‘APIAPIA’ WƆ AWIEI BERE NO MU
15. Ɔkwan bɛn so na anafo fam hene no ne atifi fam hene no “dii apiapia”?
15 Ɔbɔfo no ka kyerɛɛ Daniel sɛ: “Wɔ awiei bere no mu no, anafo fam hene no ne no bedi apiapia.” (Daniel 11:40a, NW) So anafo fam hene no ‘apia’ atifi fam hene no wɔ “awiei bere no” mu? (Daniel 12:4, 9) Yiw, wayɛ saa. Akyinnye biara nni ho sɛ asomdwoe apam a ɔde twee atifi fam hene—Germany—aso a ɔhyɛɛ no ma ɔne no yɛe wɔ wiase ko a edi kan akyi no yɛ “apiapia,” ade a ɛma otuaa no so ka. Bere a anafo fam hene no dii nkonim wɔ wiase ko a ɛto so abien no mu akyi no, ɔde nuklea akode a ɛyɛ hu kyerɛɛ ne tamfo no so, na ɔyɛɛ asraafo apam bi a ɛyɛ den a ɛne Atlantic Kusuu Fam Apam Ahyehyɛde (NATO) de tiaa no. Britaniani abakɔsɛm kyerɛwfo bi kaa NATO dwumadi ho asɛm sɛ: “Na ɛne adwinnade titiriw a ‘wɔde siw’ USSR a na ebu no saa bere no sɛ ɔman titiriw a ɛpɛ sɛ ɛsɛe Europafo asomdwoe kwan. Ɛde mfe 40 yɛɛ adwuma a wɔde hyɛɛ ne nsa no na edii nkonim pefee.” Wɔ mfe a Apuei ne Atɔe fam ntawntawdi no kɔɔ so no mu no, ‘na mfiri a wɔde yɛ akwansrafo adwuma’ ne amansɛm ne sraadi ntua ka nneɛma a anafo fam hene no de ‘piaa’ no no ho.
16. Dɛn na atifi fam hene no yɛe wɔ pia a anafo fam hene no piaa no no ho?
16 Dɛn na atifi fam hene no yɛe wɔ ho? “Na [atifi, NW] fam hene no de nteaseɛnam ne apɔnkɔfo ne ahyɛn bebree betu aba no so sɛ ahum na waba nsase no so abɛsen sɛ nsu a ayiri.” (Daniel 11:40b) Nna a edi akyiri no ho abakɔsɛm ka atifi fam hene no ahye a ɔtrɛw mu no ho asɛm. Wɔ wiase ko a ɛto so abien no mu no, Nasi “hene” yiri faa n’ahye so kɔɔ aman a atwa ne ho ahyia no mu. Wɔ saa ɔko no awiei no, ‘ɔhene’ a obesii n’ananmu no kyekyee ahemman bi a ɛyɛ den. Wɔ Apuei ne Atɔe famfo ntawntawdi no mu no, atifi fam hene no ne ne tamfo no koe denam aman a wogyinaa wɔn akyi no ntam akodi ne atuatew a ɛkɔɔ so wɔ Afrika, Asia ne Latin Amerika no so. Ɔtaa nokware Kristofo, siw wɔn dwumadi ano—nanso wantumi angu no. Ne sraadi ne n’amammui ntua ahorow no ma odii aman dodow bi so. Eyi pɛpɛɛpɛ na ɔbɔfo no hyɛɛ ho nkɔm no: “Na ɔbɛba asase fɛfɛ [Yehowa nkurɔfo honhom fam asase] no so, na nnipa bebree bɛtotɔ.”—Daniel 11:41a.
17. Anohyeto bɛn na na ɛwɔ trɛw a atifi fam hene no trɛw n’ahye mu no mu?
17 Nanso, atifi fam hene no antumi anni wiase so. Ɔbɔfo no hyɛɛ nkɔm sɛ: “Na eyinom befi ne nsam afi. Edom ne Moab ne Amonfo mu fã kɛse.” (Daniel 11:41b) Wɔ tete no, na Edom, Moab, ne Amon da Misraim hene a ɔwɔ anafo fam ne Siria hene a ɔwɔ atifi fam no ahemman ntam. Wɔ nnɛ mmere yi mu no, wɔyɛ aman ne ahyehyɛde a atifi fam hene no de n’ani saa wɔn nanso wantumi anni so no ho mfonini.
MISRAIM REMFI MU MFI
18, 19. Akwan bɛn so na anafo fam hene no tee atifi fam hene no nkɛntɛnso nka?
18 Yehowa bɔfo no toaa so sɛ: ‘Na atifi fam hene no bɛteɛ ne nsa nsase no so na Misraim asase remfi mu mfi, na obenya sika ne dwetɛ akorade ne Misraim afɛfɛde nyinaa adi so, na Libiafo ne Etiopiafo bedi n’anammɔn akyi.’ (Daniel 11:42, 43) Anafo fam hene a ɔne “Misraim” no mpo ankwati nea efii atifi fam hene no ahye a ɔtrɛw mu no mu bae no. Sɛ nhwɛso no, anafo fam hene no dii nkogu kɛse bi wɔ Vietnam. Na “Libiafo ne Etiopiafo” nso ɛ? Saa aman a na ɛbemmɛn tete Misraim no betumi ayɛ aman a ɛbemmɛn nnɛyi “Misraim” (anafo fam hene) no ho mfonini. Ɛtɔ mmere bi a na wodi atifi fam hene no ‘anammɔn akyi.’
19 So atifi fam hene no adi “Misraim afɛfɛde” so? Nokwarem no, wanya ɔkwan a anafo fam hene no de ne sika adi dwuma no so nkɛntɛnso kɛse. Esiane sɛ anafo fam hene no suro ne tamfo no nti, ɔde sika pii ahyehyɛ asraafo, ayeyɛ po so akohyɛn, ne wim akohyɛn bebree. Wɔ saa kwan yi so no, atifi fam hene no ‘dii’ sɛnea anafo fam hene no de n’ahode di dwuma no so.
ƆSATU A ETWA TO
20. Ɔkwan bɛn so na ɔbɔfo no kaa atifi fam hene no ɔsatu a etwa to no ho asɛm?
20 Atifi fam hene ne anafo fam hene no ntam akansi—sɛ ɛyɛ sraadi, sikasɛm anaa biribi foforo no—rebɛn n’awiei. Bere a Yehowa bɔfo rekyerɛkyerɛ ɔko bi a ɛbɛba mu no, ɔkae sɛ: “Nanso nsɛm a [atifi fam hene no bɛte] afi apuei ne atifi fam no beyi no hu, na ɔde anibere kɛse befi akɔ sɛ ɔkɔsɛe na wadwerɛw nnipa bebree. Na obesi n’ahemfi ntamadan ɛpo ne bepɔw fɛfɛ kronkron no ntam, nanso n’awiei bɛba a obi nni hɔ a obedi aboa no.”—Daniel 11:44, 45, NW.
21. Dɛn na yennya nhui wɔ atifi fam hene no ho?
21 Bere a woguu Soviet Union wɔ December 1991 mu no, atifi fam hene no dii nkogu kɛse. Hena na ɔbɛyɛ saa ɔhene no bere a Daniel 11:44, 45 nya mmamu no? So ɛbɛyɛ aman a anka ɛka kan Soviet Union ho no mu biako? Anaasɛ ɔbɛsakra koraa sɛnea wayɛ mpɛn pii wɔ bere a atwam no mu no? So nuklea akode a aman afoforo reyɛ no bɛma akodeyɛ ho akansi foforo aba na aka onii ko a saa ɔhene no bɛyɛ? Bere nkutoo na ɛbɛma yɛanya nsɛmmisa yi ho mmuae. Nyansa wom sɛ yɛremfa yɛn adwene mmu. Sɛ atifi fam hene no fi ne satu a etwa to no ase a, wɔn a wɔwɔ nhumu a egyina Bible so no nyinaa behu nkɔmhyɛ mmamu pefee.—Hwɛ “Ahene a Wɔn Ho Asɛm Wɔ Daniel Ti 11” a ɛwɔ kratafa 284 no.
22. Nsɛmmisa bɛn na ɛsɔre wɔ atifi fam hene no ntua a etwa to no ho?
22 Nanso, yenim nea ɛrenkyɛ atifi fam hene no bɛyɛ. Esiane sɛ amanneɛbɔ a efi ‘apuei ne atifi fam’ no bɛkanyan no nti, obetu sa bi a ɛbɛma “wadwerɛw nnipa bebree.” Henanom na obetu wɔn so sa yi? Na “nsɛm” bɛn na ɛde ntua a ɛte saa no ba?
AMANNEƐBƆ A ƐHAW ADWENE MA NE KOMA TU
23. (a) Nsɛntitiriw bɛn na ɛsɛ sɛ esisi ansa na Harmagedon aba? (b) Henanom ne “ahene a wofi owia apuei” no?
23 Susuw nea Adiyisɛm nhoma no ka fa Babilon Kɛse, wiase atoro som ahemman no awiei ho no ho. Ansa na “Onyankopɔn, ade nyinaa so tumfoɔ no, da kɛse no mu ko” a wɔfrɛ no Harmagedon no bɛba no, “wɔde ogya bɛhyew” nokware som ho tamfo kɛse yi koraa. (Adiyisɛm 16:14, 16; 18:2-8) Onyankopɔn abufuw kuruwa a ɛto so asia a wohwie gu sɛnkyerɛnne kwan so asubɔnten Eufrate so no yɛ ne sɛe ho mfonini. Asubɔnten no yow na ama “wɔasiesie kwan ama ahene a wofi owia apuei nohɔ.” (Adiyisɛm 16:12) Henanom ne ahene yi? Wɔnyɛ nnipa foforo biara sɛ Yehowa Nyankopɔn ne Yesu Kristo!—Fa toto Yesaia 41:2; 46:10, 11 ho.
24. Yehowa adeyɛ bɛn na ebetumi ahaw atifi fam hene no?
24 Wɔakyerɛkyerɛ Babilon Kɛse no sɛe mu fann wɔ Adiyisɛm nhoma no mu, nea ɛka sɛ: “Na mmɛn du a wuhui no, [ahene a wodi tumi wɔ awiei bere no mu] ne aboa no [Amanaman Nkabom no], wɔn na wɔbɛtan aguaman no, na wɔayɛ no pasaa, na wada adagyaw, na wɔadi ne nam, na wɔde ogya ahyew no.” (Adiyisɛm 17:16) Dɛn nti na sodifo no bɛsɛe Babilon Kɛse no? Efisɛ ‘Onyankopɔn de hyɛ wɔn komam sɛ wɔmma ne tirim asɛm mmra mu.’ (Adiyisɛm 17:17) Atifi fam hene no ka saa ahene yi ho. Nea ɔte ‘fi apuei’ no betumi ayɛ saa ade a Yehowa yɛ no, bere a ɔde hyɛ nnipa atumfo komam sɛ wɔnsɛe nyamesom aguaman kɛse no.
25. (a) Ade titiriw bɛn na atifi fam hene no de n’ani asi so? (b) Ɛhe na atifi fam hene no de “n’ahemfi ntamadan” no si?
25 Nanso na biribi titiriw wɔ hɔ a atifi fam hene no bɛfa ho abufuw. Ɔbɔfo no ka sɛ “obesi n’ahemfi ntamadan ɛpo ne bepɔw fɛfɛ kronkron no ntam.” Wɔ Daniel bere so no, na ɛpo kɛse no ne Mediterranea na bepɔw kronkron no ne Sion a bere bi na Onyankopɔn asɔrefie si no. Enti, wɔ nkɔmhyɛ no mmamu mu no, atifi fam hene a ne bo afuw no tu Onyankopɔn nkurɔfo so sa. Wɔ honhom fam no, “ɛpo ne bepɔw fɛfɛ kronkron no ntam” no yɛ Yehowa asomfo a wɔasra wɔn no honhom fam tebea ho mfonini. Wɔafi adesamma ‘ɛpo’ a atwe ne ho afi Onyankopɔn ho no mu, na wɔwɔ anidaso sɛ wɔne Yesu Kristo bedi hene wɔ ɔsoro Sion Bepɔw so.—Yesaia 57:20; Hebrifo 12:22; Adiyisɛm 14:1.
26. Sɛnea Hesekiel nkɔmhyɛ no kyerɛ no, ɛbɛyɛ sɛ asɛm a ‘efi apuei’ no fi he?
26 Hesekiel a ɔtraa ase wɔ Daniel bere so no nso hyɛɛ nkɔm sɛ wɔbɛtow ahyɛ Onyankopɔn nkurɔfo so wɔ “nna a edi akyiri no” mu. Ɔkae sɛ Gog a ofi Magog, kyerɛ sɛ, Satan Ɔbonsam na obedi anim ma wɔatow ahyɛ wɔn so. (Hesekiel 38:14, 16) Wɔ sɛnkyerɛnne kwan so no, ɛhe na Gog fi ba? Yehowa nam Hesekiel so ka sɛ “ofi atifi fam tɔnn.” (Hesekiel 38:15, NW) Sɛnea ntua yi ano den te mfa ho, ɛrensɛe Yehowa nkurɔfo. Nyansa kwan bi a Yehowa bɛfa so asɛe Gog dɔm no na ɛde ɔko kɛse yi bɛba. Enti, Yehowa ka kyerɛ Satan sɛ: “Mede akɔtɔkorɔ mawurawura w’afono mu, na mayi wo.” “Na mama woatu afi [atifi, NW] fam ano nohɔ tɔnn aba, na mede wo maba Israel mmepɔw so.” (Hesekiel 38:4; 39:2) Enti, ɛsɛ sɛ asɛm a efi ‘atifi fam’ a ɛhyɛ atifi fam hene no abufuw no fi Yehowa hɔ. Nanso Onyankopɔn nkutoo na ɔbɛkyerɛ nsɛm ko a ɛwɔ amanneɛbɔ a ‘wɔte fi apuei ne atifi fam’ no mu, na bere rekɔ so no yebehu.
27. (a) Dɛn nti na Gog bɛkanyan amanaman a atifi fam hene no ka ho ma wɔatow ahyɛ Yehowa nkurɔfo so? (b) So Gog ntua no bedi nkonim?
27 Gog de, esiane sɛ “Onyankopɔn Israel” ne “nguan foforo” no mu “nnipakuw kɛse” a wɔnyɛ wiase no fã bio no di yiye wɔ honhom mu nti na ɔyɛ nhyehyɛe sɛ obetu wɔn so sa no. (Galatifo 6:16; Adiyisɛm 7:9; Yohane 10:16; 17:15, 16; 1 Yohane 5:19) Sɛ Gog hwɛ “ɔman a wɔaboaboa wɔn ano afi amanaman mu na wɔanya [honhom fam] mmoa ne nneɛma na wɔte asase mfinimfini no a, na n’ani abere.” (Hesekiel 38:12) Esiane sɛ Gog bu Kristofo honhom fam asase no sɛ “asase a ano da hɔ” a ɛnyɛ den sɛ obetumi ako afa nti, ɔbɔ mmɔden kɛse sɛ ɔbɛsɛe akwanside yi a ɛmma ontumi nni adesamma so koraa no pasaa. Nanso, odi nkogu. (Hesekiel 38:11, 18; 39:4) Sɛ asase so ahene a atifi fam hene ka ho no tow hyɛ Yehowa nkurɔfo so a, ‘wɔn awiei bɛba.’
‘ƆHENE NO AWIEI BƐBA’
28. Dɛn na yenim wɔ atifi fam hene no ne anafo fam hene no daakye ho?
28 Atifi fam hene no akodi a etwa to no nyɛ nea etia anafo fam hene no. Enti ɛnyɛ atifi fam hene no tamfo kɛse no na ɔbɛsɛe no. Saa ara nso na ɛnyɛ atifi fam hene no na ɔbɛsɛe anafo fam hene no. Onyankopɔn Ahenni na ɛsɛe anafo fam hene no na ‘ɛnyɛ obi nsa.’ * (Daniel 8:25) Nokwarem no, Onyankopɔn Ahenni beyi asase so ahene nyinaa afi hɔ wɔ Harmagedon ko no mu, na eyi ara na ɛto atifi fam hene no. (Daniel 2:44) Daniel 11:44, 45 ka nsɛm a ebesisi a ɛbɛkɔ akowie ɔko a etwa to no mu ho asɛm. Ɛnyɛ nwonwa sɛ atifi fam hene no ‘rennya obi a ɔbɛboa no’ bere a wɔsɛe no no!
^ nky. 28 Hwɛ Nhoma yi Ti 10.
• Ɔkwan bɛn so na onii ko a na atifi fam hene no yɛ no sakrae wɔ wiase ko a ɛto so abien no akyi?
• Dɛn na yennya nhui wɔ nea atifi fam hene no bɛyɛ daakye no ho?
• Ɔkwan bɛn so na woanya Daniel nkɔmhyɛ a ɛfa ahene baanu no ntawntawdi ho a woatie no so mfaso?
[Nsɛmm a wɔahyehyɛ/Mfonini wɔ kratafa 284]
AHENE A WƆN HO ASƐM WƆ DANIEL TI 11
(ne yere Laodice) (ne babea Berenice)
(babea ne Cleopatra I) Nea odii n’ade:
N’adedifo: Ptolemy VI
Seleucus IV ne
Roma Ahemman gu
Daniel 11:27-30a German Ahemman Britania, a
(Wiase Ko I) Anglo-Amerika dii akyi
Daniel 11:30b, 31 Hitler Nniso a Ɛto Anglo-Amerika
(Wiase Ko II) Wiase Tumi
Daniel 11:32-43 Kommunist aman Anglo-Amerika
(Apuei ne Atɔe Asidi) Wiase Tumi
Daniel 11:44, 45 Ennya mmae * Anglo-Amerika
^ nky. 84 Nkɔmhyɛ a ɛwɔ Daniel ti 11 mmobɔ amammui ahyehyɛde a ɛbɛyɛ atifi fam hene ne anafo fam hene wɔ mmere horow mu no din. Wobehu nnipa ko a wɔyɛ wɔ bere a nsɛm no afi ase resisi no nkutoo. Afei nso, esiane sɛ ntawntawdi no kɔ so wɔ bere ne bere mu nti, bere bi wɔ hɔ a ɔko biara mma—ɔhene biako di tumi bere a ɔfoforo no nni tumi biara no.
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 271]
[Kratafa 279 mfonini ahorow]
Mfiri a anafo fam hene no de yɛ akwansra adwuma ne akodi ho ahunahuna ka ‘apiapia’ no ho
Share Share Ahene a Wɔredi Asi no Awiei Abɛn
dp ti 16 kr. 270-285